Umaki: igama elingukhiye | Martech Zone
Tag: ucwaningo lwegama elingukhiye
Ngenkathi ama-ejensi amaningi wokumaketha edijithali egxila kuphela kumkhiqizo, ukuklama, kanye nesipiliyoni samakhasimende, kwesinye isikhathi kushoda ekusebenzeni kwe-injini yokusesha (SEO). Lokho akusho ukuthi ngeke baphumelele kumakhasimende abo - imvamisa kunjalo. Kepha kusho ukuthi ukubuya kwabo akuvamile ukuhlangabezana namandla aphelele okuthola ibhizinisi elisha. Ukusesha akufani nanoma yisiphi esinye isiteshi ngoba umsebenzisi ukhombisa inhloso yokuthenga. Okunye ukukhangisa nezenhlalo